Ahoana ny fomba hahitana ny pikantsary rehetra amin'ny Mac avy amin'ny Finder | Avy amin'ny mac aho
Raha mazoto manolo-tena amin'ny fanoratana isika ary mila maka pikantsary, dia azo inoana fa raha tsy mitandrina matetika isika dia hiafara amin'ny fakana sary marobe nozarain'ny Mac antsika ny Mac. Amin'ny ankapobeny, raha tsy hoe ovay, ny pikantsary rehetra raisinay dia voatahiry ao amin'ny birao misy ny solosaintsika.
Aorian'izay dia azontsika atao ny manangona azy ireo na manafoana azy ireo raha tsy ilaina intsony izany amin'ny ho avy. Fa raha tahirinao izy ireo mba hahafahana mampiasa azy ireo indray, mety ho sarotra ny mahita azy ireo raha tsy nomenay anarana intsony izy ireo. Soa ihany amin'ny alàlan'ny Finder Azontsika atao ny mitady ny pikantsary rehetra izay voatahiry ao amin'ny solosaintsika.
Na dia marina aza fa misy fomba samihafa hahitana ny pikantsary rehetra, tsy maninona na efa notononinay anarana izy ireo na tsia, amin'ity lahatsoratra ity dia hifantoka fotsiny amin'ny fampisehoana aho ny fomba ahafahana manatanteraka fikarohana amin'ny fomba tsotra indrindra: via Finder.
Voalohany dia tsy maintsy manokatra ny Finder ianao ary mankanesa ao amin'ny boaty fikarohana. Azontsika atao koa ny mandeha mivantana amin'ny birao ary manery ny fitambarana Key + F.
Avy eo dia misafidy Mac isika, ka hanatanteraka ny fikarohana ao amin'ny Mac manontolo ary ao anaty boaty fikarohana dia manoratra "kMDItemIsScreenCapture: 1" tsy misy teny nalaina ka asehon'ny Finder avy hatrany ny pikantsary rehetra voatahiry ao amin'ny Mac.
Ny anarana itehirizana ny fisamborana azy amin'ny teny Espaniola dia «Screenshot». Ity baiko ity dia tsy mikaroka amin'ny anaran'ny fisie, fa amin'ny fomba ampiasaina hamoronana azy.
Raha te hamafa ny rehetra na ny ampahany amin'ny pikantsary asehon'ilay Finder anay aorian'ny fanaovana ny fikarohana dia mila mifantina azy ireo fotsiny izahay ary mandefa azy ireo any amin'ny fitoeram-bokatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba hahitana ny pikantsary rehetra amin'ny Mac avy amin'ny Finder